Umshini wokuhlanza izintambo we-ultrasonic i-USCM700 iyithuluzi elinamandla futhi elisebenza kahle ekuhlanzeni ngempumelelo izinto eziqhubekayo ezingapheli ezifana nezintambo, izinduku nemichilo. I-USCM700 ifaka isihlungi sebhande sokuzikhethela, esivumela ukugwenywa kwama-cartridges wokuhlunga, athambekele ekuvaleni nasekugcinweni kahle.
Ukuhlanzwa Okungathintwa Kancane Kwezinto Ezingapheli nge-USCM700
Ngohlelo lokuhlanza lwe-modular i-USCM700, izintambo, izintambo, imichilo, imicu, izintambo, namanye amaphrofayili angapheli angahlanzwa kahle ngokuqhubekayo ngaphandle kokuxhumana, kepha kusetshenziswe imiphumela yemishini eyenziwe yi-acoustic cavitation (i-ultrasound-induced cavitation). I-sonotrode eyenzelwe ngokukhethekile ukwelashwa kokuhlanzwa kwe-ultrasonic kwamaphrofayli angapheli isetshenziselwa ukukhiqiza ubukhulu obudingekayo ukuze kususwe ukungcola. Ukungcola okujwayelekile kuyizinto zokugcoba, insipho, igrisi, ukungcola nothuli oluvela ocingweni noma inqubo yokukhiqiza iphrofayili engapheli. Imibhobho yomoya esebenza kahle kakhulu noma ama-air wipes omiswa ngemuva kokuhlanzwa kususa indawo yokuhlanza.
Unyawo oluncane lwe-700x700mm lwenza ukuhlanganiswa kwe-USCM700 emigqeni ekhona yokukhiqiza izintambo kube lula. Ngisho nasendaweni yokukhiqiza eminyene, i-USCM ingatholakala isikhala ngenxa yomklamo wayo wokonga isikhala. Ngokwengeziwe, ukuqondiswa kokugeleza kwephrofayili engapheli kuyahlukahluka.
Umshini wokuhlanza we-ultrasonic modular USCM700 ifakwe isihlungi sebhande sokuhlanzwa okuphezulu kwamaphrofayli angapheli.
Ubuningi be-Ultrasonic bujwayele Izidingo Zakho Zokuhlanza
I-USCM700 uhlelo oluhlelekile olungafakwa amandla e-ultrasonic afanele kakhulu izidingo zakho zokuhlanza. Kwenziwe ngentando yezidingo zakho zokuhlanza, i-USCM700 ingafakelwa i- I-UIP500hdT (500W), I-UIP1000hdT (1kW), I-UIP1500hdT (1.5kW), noma I-UIP2000hdT (2kW). Idizayini ye-sonotrode eyingqayizivele (bona umdwebo wobuchwepheshe ngakwesobunxele) wezinhlelo zokuhlanza ze-Hielscher ezihamba emgqeni zidlulisa ama-amplitudes anamandla futhi zakha i-acoustic cavitation enamandla, esusa imidwebo yokudweba, insipho, uthuli nezinhlayiya zokungcola ngokuthembekile futhi okusebenzayo ezintweni ezingapheli ezidlula ku-sonotrode yokuhlanza . Ama-sonotrode ajwayelekile enzelwe izinto zokuhlanza ezinobubanzi obufinyelela ku-20mm. Ama-sonotrode anezimbobo zamaphrofayli angapheli anobubanzi obukhulu ayatholakala uma ucelwa
Isihlungi sebhande loboya bezimvu esinqunyelwe ukuvumela ukugwema ukusetshenziswa kwama-cartridges wokuhlunga, athambekele ekucinaneni futhi adinga ukugcinwa okuphezulu, futhi afaka isandla ekusebenzeni okungenazinkinga okuqhubekayo.
I-USCM700 ifakwe ichweba lokuxhuma lomoya ocindezelweyo (wokomiswa ngemuva kokuhlanzwa), amanzi ahlanzekile, amanzi angcolile kanye nokukhipha ithangi elisele.
Isihlungi se-USCM700 Belt
Umshini wokuhlanza izintambo wase-USCM700 uyatholakala ngokuzikhethela ngesihlungi sebhande loboya elisebenza kahle ukuze ususe shavings, splinters nezinye izinhlayiya ezingcolisayo.
Izinzuzo ezinkulu zesisefo sebhande ngaphezulu kwama-cartridges zifaka ukugwema ukuvimba futhi
Hlunga ama-cartridges athambekele ekucinaneni ngenxa yezinhlayiya ezinkulu futhi okuxegayo ngaleyo ndlela kusheshe umthamo wawo wokuhlunga. Ukushintshwa okuvela kaningi kwama-cartridge wehluzo akubizi nje kuphela, kepha futhi kudinga isitobhi sokukhiqiza somsebenzi wokulungisa. IHielscher USCM700 enesisombululo sayo esilula, kodwa esisebenzayo sesihlungi sebhande senza ukugcinwa njalo kungadingeki futhi kusekele ukusebenza okungahluphi okungenankinga kwentambo yakho yokuhlanza izintambo ese-inline.
Ukuhlanzwa kwe-Ultrasonic Inline kwe
Izintambo zensimbi eziyigugu
Ezinye izinto ezingapheli
Ukubukwa kwemininingwane kwe-ultrasonic yokuhlanza i-sonotrode ne-wire guide ye-high-performance ultrasonic yokuhlanza uhlelo lwe-USCM ngamaphrofayli angapheli
Iyasebenza futhi Ithembekile: Ukuhlanzwa kwe-Ultrasonic Kwamaphrofayli Angapheli
I-USCM700 ilungele ukususa ukungcola okusindayo njengokuthambisa izinto zokuthambisa, insipho, igrisi, uthuli, ukungcola nezinye izinsalela ezivela enqubeni yokukhiqiza ebusweni bephrofayili engapheli.
Izinto ezijwayelekile ezingapheli, ezihlanzwa kaningi kusetshenziswa isistimu yokuhlanza emgqeni we-Hielscher (isb., USCM700) zifaka okulandelayo:
izintambo, izinduku, amashubhu, imichilo, izintambo (isib. izinsimbi eziyigugu zamawashi nobucwebe noma izintambo zezokwelapha), izintambo eziboshiwe, izintambo, izintambo, ama-aluminium conductor, izintambo zasentwasahlobo, izintambo eziboshiwe, okokudla, izikhonkwane zezinwele, izintambo zezokwelapha, izintambo zepulasitiki, okokuphotha (isb. ukuthepha okokuphotha, izipikili zokuphotha, okokuphotha okuhlanganisiwe), iziphethu, kanye nemichilo enamabala phakathi kokunye.
Ukusebenza okuvelele kwe-Hielscher ultrasonic inline yokuhlanza uhlelo kuvumela ezimweni eziningi ukuhlanzwa ngamanzi kuphela noma ukusebenzisa amanani amancane ama-detergents amnene. Lokhu kwenza inqubo yokuhlanza ilunge kakhulu imvelo. Inqubo ebizayo futhi ekhandlayo yokulahla amakhemikhali ahlanzayo ahlaselayo iba engadingekile.
Izinzuzo ze-Ultrasonic Cleaning shazi:
amplitude eguquguqukayo yemiphumela emihle
ama-amplopes aphezulu afinyelela ku-20 μm wokuhlanzwa okukhulu
kususa ukungcoliswa okusindayo, okuqinile
indlela yokuxhumana engaphansi kokuxhumana
ukusebenza ngamanzi noma ama-ejenti wokuhlanza amnene
isihlungi sebhande eliqinile (uma uthanda)
umoya usula ukomisa
yakhelwe ukusebenza kwe-24/7/365
Isimiso Somsebenzi: Ukuhlanzwa kwe-Ultrasonic Kwamaphrofayli Angapheli
Iprosesa ye-ultrasonic yakha ama-longitudinal oscillations mechanical (umphumela oguquliwe we-piezo-kagesi) onemvamisa ye-20 kHz ngokuthakazelisa ngogesi.
Ama-oscillations akhuliswa yi-sonotrode efakwe ophondweni futhi yakhelwe njenge-oscillator ye-ƛ / 2 futhi idluliswa ngomphambili wayo ongaphansi kuya kulokho okuphakathi kuketshezi, okumpompwa ngomgodi wokushayisana. Ukudlidliza kwe-Ultrasound ku-sonotrode (i-20,000 / s) ene-amplitude enkulu yemishini efinyelela ku-20 μm kubangela i-cavitation kusilinganiso sonicated. Izingcindezi eziphakeme ezenzeka endaweni, amazinga okushisa nokwehluka okuhlukile, okwenziwa ngenxa ye-acoustic cavitation, izinqubo zokubangela ezisizakala ekuhlanzeni okukhulu komhlaba kwezinto ezingapheli ezifana nezintambo, izinduku, imichilo nezinye izinto eziqhubekayo.
Sicela usebenzise ifomu elingezansi ukucela imininingwane eyengeziwe mayelana ne-ultrasonic inline yokuhlanza uhlelo lwe-USCM700, izinhlelo zokusebenza namanani entengo. Sizojabula ukuxoxa ngenqubo yakho nawe futhi sikunikeze uhlelo lwe-ultrasonic oluhlangabezana nezidingo zakho!
I-USCM700 Ultrasonic Cleaning Module yokuhlanzwa kokusebenza okuphezulu kwamaphrofayli angapheli